युगसम्बाद साप्ताहिक - सत्ता जोगाएर जित्न खोज्ने बाबुराम हारिसके- महेश्वर शर्मा
Tuesday, 04.07.2020, 08:40am (GMT+5.5) Home Contact
सत्ता जोगाएर जित्न खोज्ने बाबुराम हारिसके- महेश्वर शर्मा
Monday, 01.02.2012, 03:43pm (GMT+5.5)
देशको माया हुने र आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी सम्झने मान्छे व्यक्तिगत फाइदाका लागि देशलाई विगार गर्ने काम गर्दैन र त्यस्तो गर्न अरुलाई पनि दिंदैन । तर यहाँ विना त्याग तपस्या देशबाट फाइदा मात्रै लिने र तोड्फोड एवं विध्वंश मच्चाएर जगहँसाइ गराउनेहरू ठूलठूला पदमा पुगेर जनताका थाप्लामा गिर खेलिरहेका छन् । इमान जमानाको त खडेरी नै परेको छ । जजसले राज्य कोषमा लूट मच्चाएर अरुलाई पनि त्यसै गर्न दिएका छन्, तिनीहरू नै यहाँ सर्वेसर्वा छन् । भन्ने बेलामा ठूलो बलिदानबाट ल्याएको व्यवस्था भन्छन्, तर त्यो बलिदान कसको ? तिनै निमुखा गरिब जनताको होइन ? खै के पाए ती अबोध जनताले ? प्रश्नैप्रश्न छन् यहाँ, तर चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।
एउटा आउँछ, लुट्छ, अर्काे आउँछ, लुटछ, गर्दागर्दा अब त देशलाई हरिकंगाल बनाइसके । न शान्ति सुरक्षा, न रोजगारीको व्यवस्था, कलकारखाना कोही बेचेर खाए, कोही ध्वस्त पारे । अब बाँकी रहेकामा पनि आफैंले बन्द, हड्ताल गराएर चल्न दिंदैनन् । स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय जतासुकै बन्द, जतासुकै तालाबन्दी हुँदाहुँदा सरकारी कार्यालयमा पनि तालाबन्दी अब त अति नै भैसक्यो । न जनताको जीउधनको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती, पानी जस्ता सामान्य सेवा सुविधाबाट पनि जनता वञ्चित हुनुपरेको छ । जता हे¥यो उतै ध्वंशात्मक राजनीति, कसको के काम हो कसैलाई मतलब छैन । सबै राजनीति गर्ने, सबै नेता बन्ने । यस्ता बयलपातेहरूले पनि देश चलाउँछन् ? लाजमर्दो भैसक्यो ।
नेताहरू साँच्चै नै इमान्दार छन् र देशलाई वर्वाद हुनबाट जोगाउने हो भने ट्रेड यूनियनहरू, संघ संगठनहरू र गैरसरकारी संस्थाहरू बन्द गरेर कर्मचारी, विद्यार्थी र मजदुरहरूलाई स्वतन्त्र रुपबाट आफ्नो काम गर भन्नुपर्छ । राजनीति त दलका नेता, कार्यकर्ताले गर्ने हो, अरुले आ–आफ्नो तोकिएको काम गर्नुपर्दछ । राजनीति गर्ने हो भने पार्टीमै लागेर गर्नुपर्छ, जागीर खाएर होइन । जनतालाई गुलियो चटाएर भँड्याउने, फुटाउने, धर्म संस्कृतिमा हस्तक्षेप गर्ने, जातीय विद्वेष फैलाउने काम जसरी गैरसरकारी संस्थाहरूले गरिहेका छन्, अब पनि निरपेक्ष भएर काम गर्दैनन् भने त्यस्तालाई पूर्णरुपेण रोकेर विदा गर्नुपर्छ र नेपालले आफ्नै परिश्रममा देश निर्माण गर्ने अठोट नेताहरूले लिनुपर्छ, नत्र यी विदेशी संस्थाले नेपालीलाई आशामुखी बनाएर डुबाउँछन् ।
जतिसुकै राम्रो सिद्धान्त वा उद्देश्य भए पनि स्वार्थ पन्छाउन नसक्ने सही ठाउँमा पुग्दैन । प्रधानमन्त्री बाबुराम पनि हिंड्दाहिंड्दै स्वार्थको मायामा फसिसके । उनको स्वार्थको भोकले अब निरन्तर सत्ता सुखभोगतिर उनलाई ढल्काइसक्यो । देश र जनतालाई उपयोगी हुने बाटो उनले बिर्सिसके । कुर्सी जोगाउने ध्याउन्नमा उनले बाहिरी हस्तक्षेप पन्छाउने क्षमता गुमाइसके । गिरिजाप्रसादले लाखांै भारतीयलाई नागरिकता दिएर भित्र्याएको बाटो बाबुरामले पनि समात्दैछन् । सेनामा दश हजार मधेशीलाई सामूहिक प्रवेश गराउने उपक्रम त्यसैको एउटा अंग भैसक्यो । बाबुरामले आफ्नो पद जोगाएर जितें भन्ठानेका होलान्, तर उनले हारिसके । उनी अब ठाउँमा पुग्ने सम्भावना क्षीण भैसकेको छ ।
डा. बाबुराम बलियाको गोटी बनेर कमजोर तत्वका सहारामा सत्तामा धरमराइरहेका छन् । यिनको निजी दृढता फितलो भैसकेको छ । पहिले लडाकु व्यवस्थापन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएल विघटन र संविधान निर्माणलाई क्रमशः प्राथमिकता राख्नुपर्नेमा ती सबैलाई पछाडि पारेर कहिले मन्त्रिमण्डल विस्तार, कहिले समूह विशेषलाई सेनामा सामूहिक भर्ती त कहिले नागरिकता विधेयकलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । पाँच सात हजार लडाकूलाई सेनामा समावेश गरिंदैछ भने त्यो कामलाई थाती राखेर पहिले नै तीन हजार मधेशीलाई हतारिएर सेनामा भर्ती गर्नपर्नुको अर्थ र रहस्य बुझिनसक्नु भएको छ । लडाकु समायोजनभन्दा मधेशीको सामूहिक प्रवेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्नाको औचित्य के हो ? यसैबाट बाबुरामको व्यवहार शंकास्पद हुनगएको छ ।
आत्मविश्वास कमजोर भएपछि मान्छे उत्साहहीन भएर सहारा खोज्छ । बाबुराम अहिले उनैका शब्दमा ‘ठेगान नभएका’ मधिशे दलहरूको त्यान्द्रोमा झुण्डिएका छन् । भरोशा नै खोज्न परेपछि बलियो नखोजेर उनले कमजोर किन रोजे ? कमजोर साधनबाट उनी लक्ष्यमा पुग्लान् ? उनको टाउको ठाडो होला कि निहुरिएला ? आफ्नो योग्यता र क्षमताको विश्वास नभएपछि मान्छेले गलत साधन प्रयोग गर्न समेत बेर मान्दैन भनेको यही हो । बाबुराम अहिले देश र जनताको दीर्घकालिक हितमा अडिनुको सट्टा क्षणिक स्वार्थका लागि जात फालिरहेका छन् । उनको निर्णय देशको हितमा त छैन छैन, स्वयं उनको स्वार्थका लागि पनि हितकर छैन ।
बुद्धि–विवेक पुपुर्याएर काम गर्न सकिएन भने असफलता आफैं निम्तिन्छ । बाबुरामको चर्चित विद्वता र नेतृत्व स्वार्थकेन्द्रित भएको अनुभव गरिंदैछ । चाहनाको कुनै सीमा हुँदैन । बाबुरामले पनि आफ्ना असीमित चाहना पूर्तिका लागि जस्तोसुकै उपाय अथवा बाटो समात्न पनि संकोच नमान्ने भएका छन् । यसबाट उनका भौतिक चाहना त पूरा होलान्, तर उनीप्रतिको जनताको भरोशा भने भत्किने छ । बाबुरामको तेज मधेशको आयातित कुहिरोले निश्तेज भएको छ । उनी कसैको लगामबाट डोरिएका छन् भनिन्छ । जेजस्तो स्थितिमा भए पनि नेताको काम कुरो मूल्यांकन जनताले आफ्नै किसिमले गरिरहेका हुन्छन् ।
कसैले किन्न नसक्ने, कसैले बाँध्न नसक्ने भनिएका बाबुराम आज हात खुट्टा बाँधिएका स्थितिमा रहन्छन् र कसैको मर्जीमा चल्छन् भन्ने कुरा अविश्वसनीय लागे पनि काम कार्वाहीबाट विश्वास नगरी सुखै नपाइने भएको छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं यसरी नकुजिनोस्, आफ्नो छवि नधमिल्याउनोस्, आफ्नो तागत र गुण निष्पक्ष र निर्भिक भएर देखाउनोस् । पद स्थायी होइन, चारित्रिक शक्ति सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, जसले स्वार्थवश जता ढल्कायो उतै नढल्कनोस् । आज बोलेको बोली भोलि फेर्ने गरी नबोल्नोस् । आफूलाई च्यूत गराउने खराब साधन तपाईं आफैंले बोकेर हिंड्नु भएको छ । याद गर्नोस्, एकपटक खसेपछि उठ्न गाह्रो हुन्छ ।
त्यसैले आजका जस्तो ढुलमुले होइन, दृढताका साथ निष्पक्ष भएर आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्नोस् । जनतालाई बिर्सनु भएन भने जनताले साथ दिनेछन् । आफैं सोच्नोस्– भ्रष्टहरूलाई साथमा लिएर हिंड्ने कि जनतालाई ? अन्त्यथा ‘उँधै सलल लौरी पनि म पनि’ हुन बेर लाग्ने छैन । शुभमस्तु ।
क्योटो प्रोटोकलको प्रतिबन्धि धारा कार्यान्वयनमा जोड : यादब देवकोटा (11.28.2011)
लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र दुवै हसपिसमा : तारा सुवेदी (11.28.2011)
जातिवादीहरू देश टुक्र्याउने भूमिका खेल्दैछन् : महेश्वर शर्मा (11.28.2011)
दक्षिण एसियाले आफ्नो परिचय बदल्नुपर्छ : यादब देवकोटा (11.21.2011)
वैचारिक अस्थिरता र अन्योलको स्थिति : महेश्वर शर्मा (11.21.2011)
विवेकपूर्ण पत्रकारिता गरौँ कि मित्रहरु ! : तारा सुवेदी (11.21.2011)
आ–आफ्ना स्वार्थको भारी बोकेर गन्तव्यमा पुगिदैन : यादब देवकोटा (11.14.2011)
डाइरेक्टर आफैं नाच्ने होइन, अरूलाई नचाउने हो : महेश्वर शर्मा (11.14.2011)